देश दिनानुदिन व्यापार घाटाको दुष्चक्रमा फस्दै गइरहेको छ । व्यापार घाटा झन्डै ९६७.४ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । हाल आयात १ खर्ब डलर छ भने निर्यात मात्र ७८.२ मिलियन अमेरिकी डलर छ ।निर्यातको तुलनामा आयात लगभग १४ गुणा बढी छ ।
यही रफ्तारमा व्यापार घाटा र ऋणात्मक शोधनान्तर स्थिति बढ्दै गएमा चरम आर्थिक विसंगति उत्पन्न भई मुलुक टाट पल्टने अवस्था आउन सक्छ। अथवा अर्थतन्त्र ओरालो लागेर पाकिस्तानझैं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको शरणमा पुग्न बाध्य हुन सक्छ । यस्तो भयावह आर्थिक अवस्थामा पनि सरकार उखान–टुक्का र हावादारी सपनामा रमाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को बेसुरा राग अलापी रहेको छ ।
यो भयावह व्यापार घाटा र ऋणात्मक शोधनान्तर स्थिति निम्त्याउने प्रमुख कारक तत्त्वहरू के के हुन् त ? समाधानका उपाय के के हुन सक्छन्? यी आजका यक्ष प्रश्न हुन् । पहिलो, आन्तरिक उत्पादन बढाउन स्वदेशी लगानी बढाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने । दोस्रो, ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर उत्पादन बढाई निर्यात गर्ने।
सरकार भने राष्ट्रको आर्थिक भविष्य सुखद छ भनी जनतालाईढाँटिरहेको छ । देशलाई यो भयावह ऋणात्मक शोधनान्तर स्थितिको अवस्थामा पुर्‍याउने अर्को प्रमुख कारक तत्त्वभनेको सरकारी ऋण पनि हो । यो कहालीलाग्दो आर्थिक दुरवस्थाको चक्रबाट बाहिर ल्याई देशलाई विकसित र समृद्ध बनाउन वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक र अपरिहार्य छ । यस प्रयोजनका लागि सरकारले दुई–दुइटा लगानी सम्मेलन गरिसक्यो तर वैदेशिक लगानी बढ्नुको साटो अत्यधिकदरमा घट्दै छ ।
वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिनु, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनहरू एवं मुनाफाको सम्भावनालाई वैदेशिक लगानीकर्ताहरूबीच प्रचारप्रसार नगरिनु, पँुजीबजार र मुद्राबजार विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिनु, ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ र साख योग्यता सूचकमा धेरै तल हुनु, लालफित्ता शाहीको जालोमा अल्झिनुजस्ता कारणले पनि वैदेशिक लगानीमा कमी आएको हो।
यो हाम्रो सुझाव हो नेकपालाई, यदि ‘कल्याणकारी उदारवाद’ पाच्य छैन भने संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दलाई भए पनि हटाउनुस् र नेकपाका मित्रहरू तपाईंहरूलाई मात्र चित्तबुझ्ने हैन कि वैदेशिक लगानीसमेत आकर्षित गर्न सक्ने उपयुक्त शब्दावली राख्नुस् । तपाईंहरूसँग भएको दुई तिहाइ संसदीय बलको सदुपयोग यसरी गर्नुहोस् ।
लेखक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष हुन् ।
प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०९:०५
कतिपय अभिभावकलाई भने अझै पनि पुस्तकालयको महत्त्व बोध हुन सकेको छैन । कतिपय अभिभावक ‘आऽ के नै हुन्छ र पुस्तकालय गएर !’ भन्ने गर्छन् । यस्ता अभिभावकका लागि टोलछिमेकमा खुलेका पुस्तकालय ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ सरह भएका छन् । यसो हुनुमा वर्तमान शिक्षाकै पनि दोष छैन । किनभने कतिपय चलेका निजी विद्यालयमा निम्न माविदेखि मात्र विद्यार्थीले पुस्तकालयको पहुँच पाउनेगरेका छन् ।
पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको सहज पहुँच भएपछि हुनेखाने घरका अभिभावकहरू अधिकांश समय सामाजिक सञ्जालमा बिताउने गरेकाले यसको नकारात्मक असर बालबालिकामा पर्दै छ । यस्ता अभिभावकले आफ्ना कलिला छोराछोरीलाई फकाउन, फुल्याउन स्मार्ट फोन र ट्याब दिनेगरेका छन् ।
यिनमा अभ्यस्त बालबालिकाले जेनतेन कक्षाकार्य र गृहकार्य गरे पनि उनीहरूमा बिस्तारै पढ्ने भोक हराउँदै जान्छ र कालान्तरमा यस्ता विद्यार्थीका लागि पढाइ बोझ बन्नजान्छ । यी र यस्ता कतिपय कारणलेअचेल बालबालिकामा पढ्ने भोक हराउँदै गएको छ ।
सहरी क्षेत्रका बालबालिकामा पढाइप्रति भोक जगाउन र शिक्षाको महत्त्व बुझाउन बालपुस्तक र पुस्तकालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । पछिल्लो समय स्कुले जीवनमा अतिरिक्त पुस्तक पढ्ने अवसर पाएका अधिकांशले विश्वविद्यालय शिक्षापूरा गर्ने गरेको अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएका छन् ।
कर्णधार हुन्, जसले समाजलाईसभ्य बनाउँछन् ।